အာဏာပိုင် - မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဖြည့်စွက်ချက်များ - အကျိုးကျေးဇူးများ၊
ပင်မစာမျက်နှာ > မဂ္ဂနီစီယမ် L-Thronate ဖြည့်စွက်ချက်များ
သငျသညျအကောင်းတစ် ဦး ရှာဖွေနေလျှင် မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ဖြည့်စွက်Cofttek မှမဂ္ဂနီစီယမ်ထရွန်နိတ်အမှုန့်များ ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီသည်မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသို့ရောက်ရှိနိုင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှပြောကြားသည်မှာကုမ္ပဏီမှပေးသောအမှုန့်သည်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်မှုကိုအထောက်အကူပြုပြီးသိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် အသုံးပြုသူများပိုမိုကောင်းမွန်စွာအိပ်နိုင်အောင်လည်းကူညီသည်။ Cofttek သင့်အား အလွန်ထိရောက်စွာ ရောင်းချပေးမည့် Magnesium L-Threonate ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ.
Magnesium L-Threonate ဆိုတာဘာလဲ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L Threonate ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
မဂ္ဂနီစီယမ် Thononate ပိုကောင်းပါသလား
Magnesium Glycinate သည် Magnesium citrate ထက် ပိုကောင်းပါသလား။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည် poop ဖြစ်စေသလား။
မဂ္ဂနီစီယမ် L Threonate မည်မျှကိုကျွန်ုပ်သောက်သင့်ပါသလဲ။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည် ဦး နှောက်မြူကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည် ဦး နှောက်ကိုကျန်းမာစေသလား။
မဂ္ဂနီစီယမ် L Threonate သည်သွေးပေါင်ချိန်အတွက်သင့်တော်ပါသလား။
မဂ္ဂနီစီယမ် citrate နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်ဂလူးကနိတ်အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L Threonate သည်မည်မျှကြာကြာအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလဲ။
ဗီတာမင် D သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်သလား။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည် serotonin ကိုတိုးပွားစေပါသလား။
အကောင်းဆုံးမဂ္ဂနီစီယမ် L Threonate ကဘာလဲ။
အဘယ်ကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ် glycinate ပိုကောင်းသလဲ?
မဂ္ဂနီစီယမ်သည် Glycinate သည်မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်အတူတူလား?
မဂ္ဂနီစီယမ် Glycinate သည်မင်းကိုကူညီပေးသလား။
မဂ္ဂနီစီယမ် L Threonate သည်စိုးရိမ်စိတ်အတွက်ကောင်းပါသလား။
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်မဂ္ဂနီဆီယမ် L-Threonate လိုအပ်?
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကဘာလဲ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာအဘယ်နည်း။
မဂ္ဂနီစီယမ် L Threonate ကိုဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါသလဲ။
Threonic acid သည်ဗီတာမင်စီ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ပျက်ပြားခြင်းမှရရှိသောရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ threonic acid သည်မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပါက၎င်းသည်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ဟုခေါ်သောဆားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ခန္ဓာကိုယ်ကအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ပြီးမဂ္ဂနီစီယမ်ကို ဦး နှောက်ဆဲလ်များနှင့်အခြားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများသို့ရောက်ရှိစေရန်အထိရောက်ဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate မှရရှိသောမဂ္ဂနီစီယမ်သည်အရေးကြီးသောဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သော B ဗီတာမင်များ၊ အင်ဆူလင်လျှို့ဝှက်ခြင်း၊ ATP ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပရိုတိန်းနှင့်ဖက်တီးအက်စစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဓာတ်သတ္တုသည်အင်ဇိုင်းများစွာ၏သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုကိုကူညီရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့၎င်းသည်သဘာဝလူသတ်သမားဆဲလ်များနှင့် cytotoxic T-Lymphocytes များ၏ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အကျိတ်ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုဓာတ်သတ္တုကြွယ်ဝသောသဘာဝအစားအစာများစွာမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏများစွာပါဝင်သောအစားအစာအချို့မှာမှောင်မိုက်သောချောကလက်၊ ထောပတ်သီး၊ အခွံမာ၊ ပဲ၊ tofu၊ ဖရုံသီးနှင့် chia မျိုးစေ့များ၊ အဆီငါးများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့ပေးသောမဂ္ဂနီစီယမ်သည်ဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုစနစ်တကျထိန်းထားနိုင်ရန်မလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ဖြည့်စွက်ဆေးများဝယ်လိုအားသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည် ၄ ​​င်း၏ nootropic အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်၊ သင်ယူမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးစေသည်။ ဤဖြည့်စွက်ချက်သည်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှု၊ ADHD၊ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရသောလူနာများအတွက်ဆေးညွှန်းထိုးဆေးဖြစ်သည်။
အဆိုပါမူလတန်း အကျိုးsမဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ၏ မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် synaptic သိပ်သည်းမှုနှင့်ပလပ်စတစ်ကိုတိုးစေပြီး ဦး နှောက်အတွင်းရှိ neurotransmitter ထုတ်လွှတ်သည့်နေရာများစုစုပေါင်းကိုတိုးစေနိုင်သည်။
၎င်းဖြည့်စွက်ခြင်းသည် Spatial Memory ကိုလည်းတိုးတက်စေပါသည်။ ကြွက်တစ်ခု၏လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၂၄ ရက်အပြီး Magneisum L-Threonate ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်မှတ်ဉာဏ်သည် ၁၃% တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ရက် ၃၀ ကြာအစာဖြည့်ပြီးနောက်အသက်အရွယ်ကြွက်များသည်သူတို့၏အငယ်ကောင်များနှင့်တူညီသောအဆင့်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းဖြည့်စွက်ခြင်းသည်လူငယ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှစ် ဦး စလုံးအတွက်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သော်လည်းသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်ကိုဆိုလိုသည်။ အမှန်မှာအသက်အရွယ်ကြွက်များတွင်တိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၁၉% ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်၊ ၎င်းသည်ငယ်ရွယ်သောကြွက်များ၏ ၁၃% တိုးတက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းဖြည့်စွက်ခြင်းသည်အိုမင်းသူများအတွက်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
အထူးသဖြင့် ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေပါကမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးမဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံဖြစ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်းထိုမဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံနှင့် ဦး နှောက်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်အမျိုးမျိုးကိုရရှိနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မဂ္ဂနီစီယမ်စီထရိတ်နှင့် / သို့မဟုတ်မဂ္ဂနီစီယမ်ဂလိတ်စတာကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းစသည့်အခြေအနေများအတွက်ဂလိုင်စကိတ်ပုံစံသည်ဝမ်းချုပ်ရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုဤဆေးများဖြင့်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းနိုင်သည်။ ဤဆေးဝါးအချို့တွင် nifedipine (Adalat, Procardia), verapamil (Calan, Isoptin, Verelan), diltiazem (Cardizem), isradipine (DynaCirc), felodipine (Plendil), amlodipine (Norvasc) နှင့်အခြားသူများပါဝင်သည်။
Stool Softener - မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ရေကိုအူထဲသို့ဆွဲဆောင်။ osmotic laxative ဖြစ်သည်။ ရေ၌ဤအတိုးအူသိမ်လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်။ ဒါဟာအစပျော့ပျောင်းခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ခြင်း, အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်နှင့်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကူညီပေးသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်ပါးစပ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဆေးပြားများကိုသော်လည်းကောင်း၊ အရောအနှောရောသော်လည်းကောင်းသောက်နိုင်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate (သို့) မူးယစ်ဆေးဝါးမှန်ကန်စွာသောက်သုံးခြင်းသည်သောက်သုံးသူ၏အသက်နှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေသည့်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၃၀ ကြားအမျိုးသမီးများသည်တစ်နေ့လျှင် ၃၁၀ မီလီဂရမ်သောက်ရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ အသက်တူအုပ်စုရှိအမျိုးသားများသည်တစ်နေ့လျှင် ၄၀၀ မီလီဂရမ်ခန့်သောက်သုံးရန်လိုအပ်သည်။ လူကြီးများသည်တစ်နေ့လျှင် ၄၂၀ မီလီဂရမ်အထိသောက်သုံးနိုင်သည်။ ထိုအသက်အရွယ်အုပ်စုရှိအမျိုးသမီးများသည်နေ့စဉ်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကို ၃၆၀ မီလီဂရမ်သောက်သင့်သည်။ မိခင်နို့ရည်တိုက်ကျွေးသောအမျိုးသမီးများသည်လည်းဤဆေးကိုသောက်သုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်နေ့စဉ်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုတစ်နေ့လျှင် ၃၂၀ မီလီဂရမ်အောက်လျော့နည်းစွာသုံးစွဲသင့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်တိကျသောအခြေအနေများအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုသောက်နေပါကဆေးသောက်သုံးရသည့်ရည်ရွယ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ သင်၏သောက်သုံးသောပမာဏကိုပြုပြင်ရပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ သင်သည်အစာခြေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပြissuesနာများအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုသောက်နေလျှင်နေ့စဉ် 400-1200 mg ကိုသောက်ရန်အကြံပြုပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဖြည့်စွက်စာကိုအသုံးပြုနေလျှင်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်သင်နေ့စဉ်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate 1000 mg ကိုသောက်သင့်သည်။ ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းအတွက်မဂ္ဂနီဆီယမ် L-threonate ၏ ၄၀၀-၄၂၀ မီလီဂရမ်သည်အမျိုးသားများအတွက်လုံလောက်ပြီး ၃၁၀ မှ ၃၆၀ မီလီဂရမ်တွင်အမျိုးသမီးများအတွက်လုံလောက်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကလွယ်ကူစွာစုပ်ယူနိုင်ရန်အခြားတ္ထုများနှင့်မကြာခဏချိတ်ဆက်ထားသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်အမျိုးအစားများကို၎င်းပေါင်းစပ်ထားသောအရာများအရအမျိုးအစားခွဲထားသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်အမျိုးအစားများမှာ -
မဂ္ဂနီစီယမ် glycinate ။ မကြာခဏကြွက်သားနာကျင်မှုလျှော့ချရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် citrate ။ အလွယ်တကူခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူနှင့်လည်းချုပ်နှောင်ထားကုသရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ကလိုရိုက်။ အလွယ်တကူခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူ။ S
မဂ္ဂနီစီယမ် sulfate (Epsom ဆား) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်သော်လည်းအရေပြားမှတဆင့်စုပ်ယူနိုင်သည်။
လေ့လာမှုများ၏ ၂၀၁၇ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအရ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလေ့လာမှုအများစုသည်မဂ္ဂနီစီယမ်လက်ကျက်သို့မဟုတ်မဂ္ဂနီစီယမ်အောက်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်ဂလိတ်စင်းကိုအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်သောဂုဏ်သတ္တိရှိသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အိပ်မပျော်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ သို့သျောလညျး, ဒီအသုံးပြုမှုအပေါ်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားကန့်သတ်သည်, ဒါကြောင့်ပိုပြီးလေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်ဂလိတ်စတင်းသည်၎င်း၏အေးဆေးတည်ငြိမ်သောသက်ရောက်မှုများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊
များသောအားဖြင့် ဦး နှောက်မြူ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှေးကွေးခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှေးကွေးခြင်းတို့ကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည် ဦး နှောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ကျန်းမာသော ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှုတို့တွင်ပါ ၀ င်သော NMDA receptors များအတွက်တံခါးစောင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းသည်အာရုံကြောဆဲလ်များကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး၎င်းသည်သူတို့ကိုသတ်နိုင်ပြီး ဦး နှောက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်အမျိုးအစားသည်သွေးကြောထဲ ၀ င် ရောက်၍ သင်၏ ဦး နှောက်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်သည်။ ဆဲလ်များကအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ပြီးသွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးလေဖြတ်ခြင်းကိုလည်းတားဆီးနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် citrate သည်အသုံးအများဆုံးမဂ္ဂနီစီယမ်ဖော်စပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဆိုင်များတွင်အလွယ်တကူ ၀ ယ်နိုင်သည်။ လေ့လာမှုအချို့အရဤအမျိုးအစားသည်ဇီဝရရှိနိုင်သည့်မဂ္ဂနီစီယမ်အများဆုံးပုံစံများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အခြားအရာများထက်သင်၏အစာခြေလမ်းကြောင်းတွင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် သင်တစ် ဦး ဖြည့်စွက်ကြိုးစားချင်လျှင် citrate အထိရောက်ဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်နိုင်သည်။ သင်မဂ္ဂနီဆီယမ်ချို့တဲ့ပါကဤအာဟာရဓာတ်များကိုစားသုံးခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမှအခြားအကျိုးကျေးဇူးများရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းအတွက်အခြားကုစားမှုများလည်းရှိသည်။
သုတေသနကစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ လေ့လာမှုများအရမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုပိုမိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ထိတ်လန့်ခြင်းများကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ကြောင်း၊ ရလဒ်ကောင်းများမှာယေဘူယျစိုးရိမ်ပူပန်မှုပြtoနာကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။
မဂ္ဂနီစီယမ်ဂလိတ်စင်းနစ်ကိုအိပ်စက်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောရောင်ရမ်းခြင်းများကိုကုသရန်အတွက်သီးသန့်ဖြည့်စွက်အစားအစာအဖြစ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်ဂလိတ်စင်းကိုအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်သောဂုဏ်သတ္တိရှိသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အိပ်မပျော်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
သင့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏကိုမြှင့်တင်ရန်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုသောက်သုံးခြင်းအပြင်သင့်အနေဖြင့်ဤဓာတ်သတ္တုများပေါကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ ဤအစားအစာများသည်သင့်စိတ်ထဲရှိလိုအပ်သောမဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိစေပြီးဓာတ်သတ္တုအကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုခံစားနိုင်သည်။ ဒီမှာအချို့ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အစားအစာထဲမှာ;
အမှောင်ချောကလက် - ၎င်းသည်အရသာရှိပြီးကျန်းမာသည့်အပြင်မဂ္ဂနီဆီယမ်၏ ၆၄ မီလီဂရမ်ကို RDI ၏ ၁၆% ကိုသယ်ဆောင်သည်။ ထို့အပြင်မှောင်မိုက်သောချောကလက်သည်ကြေးနီ၊ သံ၊ မန်းဂနိစ်များနှင့် prebiotic fiber များပေါများသည်။
ထောပတ်သီး - ဤအရသာရှိပြီးအာဟာရပြည့်ဝသောအသီးသည် ၅၈ မီလီဂရမ်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုရရှိစေပြီး၎င်းသည် RDI ၏ ၁၅% ခန့်ရှိသည်။ ၎င်းအသီးသည်ဗီတာမင် B၊ K နှင့်ပိုတက်ဆီယမ်များစွာရရှိသည်။
Nutsare သည်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သဘာဝရင်းမြစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သီကုံးပုလင်း ၁- အောင်စသည်မဂ္ဂနီစီယမ် ၈၂ မီလီဂရမ်ရှိပြီး RDI ၏ ၂၀% ရှိသည်။
Legumessuch - ပဲ၊ ပဲ၊ ပဲ၊ နှင့်ပဲပုပ်ကဲ့သို့သောမဂ္ဂနီစီယမ်အပါအ ၀ င်မတူညီသောဓာတ်သတ္တုများပေါကြွယ်ဝသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပဲချက်ပြုတ်ထားသောပဲတစ်ခွက်တွင်မဂ္ဂနီဆီယမ် ၁၂၀ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည် RDI ၏ ၃၀% ဖြစ်သည်။
တိုဖူကဲ့သို့သောအခြားအစားအစာများ၊ chia အစေ့များ၊ ဖရုံသီးအစေ့များ၊ အဆီငါးများလည်းရှိသည်။ ဤမဂ္ဂနီစီယမ်ကြွယ်ဝသောအစားအစာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်၏အာဟာရပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာစွာနေရန်လိုအပ်သောအာဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုကြာရှည်စွာသောက်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဖြစ်စဉ်များအတွက်အရေးကြီးသည်။ ကြွက်သားနှင့်အာရုံကြောများ၊ သွေးသကြားဓာတ်၊ သွေးပေါင်ချိန်နှင့်ပရိုတင်း၊
၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းကိုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်စေသောမဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံများသည်မဂ္ဂနီစီယမ်ကာဗွန်နိတ်၊ ကလိုရိုက်၊ ဂလူးကနိတ်နှင့်အောက်ဆိုဒ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်ဆား၏ ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်သက်ရောက်မှုများမှာအူနှင့်အူမကြီးအတွင်းရှိစုပ်ယူခြင်းမရှိသောဆားများ၏ osmotic လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပါးစပ်ဖြင့်မျိုချမိသော MgT သည် ဦး နှောက်မဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အနည်းဆုံးတစ်လကြာမြင့်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏပုံမှန်ထက်နိမ့်ကျသောအခါမဂ္ဂနီစီယမ်နိမ့်သောကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်နိမ့်ကျသောအကြောင်းရင်းများတွင် -
Hyperaldosteronism (adrenal gland သွေးသည် aldosterone ဟော်မုန်းကိုသွေးထဲသို့ထုတ်လွှတ်သည့်ရောဂါ)
ကျောက်ကပ် tubule မမှန်
ထိုကဲ့သို့သော celiac ရောဂါနှင့်ရောင်ရမ်းအူသိမ်အူမရောဂါအဖြစ် Malabsorption Syndrome
amphotericin, cisplatin, cyclosporine, diuretics, proton pump inhibitors နှင့် aminoglycoside ပantibိဇီဝဆေးများအပါအ ၀ င်ဆေးဝါးများ။
တိရိစ္ဆာန်နှင့် In vitro စမ်းသပ်ချက်များအရဗီတာမင် D သည်သိပ္ပံနည်းကျကျဆင်းမှုနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အတွက်ကုထုံးဆိုင်ရာအလားအလာရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုနှစ်ခုအရ ၂၅ (OH) D အဆင့်နိမ့်သိပ္ပံနည်းကျသိသိသာသာကျဆင်းခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။
ထုတ်လုပ်သူကမဂ္ဂနီစီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ကြွက်သားများနာခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ သူတို့ကဒီမဂ္ဂနီစီယမ် (မဂ္ဂနီစီယမ်ဘီစဂလင်းစတင်း) သည်အခြားသတ္တုဓာတ်များထက်အစာအိမ်တွင်ပိုမိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ကြောင်းရှင်းပြသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုတစ်နေ့တာအချိန်မရွေးသောက်နိုင်ပါသည်။ အချို့သူများအတွက်နံနက်ယံ၌ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုအလွယ်ကူဆုံးသောက်သုံးနိုင်သည်၊ အချို့ကညစာစားချိန်တွင်သို့မဟုတ်အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်သူတို့အတွက်အဆင်ပြေကြောင်းအချို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် (Mg) ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အမျိုးမျိုးသောအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများတွင်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေရန်ပြသထားသည်။ အရံအာရုံကြောရောဂါများအတွက် Mg ဖြည့်စွက်ခြင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုယခုအချိန်အထိဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းလက္ခဏာများတွင်ကြွက်သားညှပ်ခြင်း၊ တုန်ခါခြင်းနှင့်ကြွက်တက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သို့သော်ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ဤရောဂါလက္ခဏာများကိုမလုံလောက်သောလူများတွင်လျှော့ချရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပါကင်ဆန်လေ့လာမှုမှ ဦး နှောက်ကို ဦး နှောက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပုံစံတွေ့ရှိရကြောင်း၊
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ၊ ရောဂါကူးစက်မှု၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းအားနည်းခြင်း၊ မကြာသေးမီကခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးပြproblemsနာများသည် PD လက္ခဏာများကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း (ဆီးအိမ်ရောဂါလက္ခဏာများမပါရှိပါက) သည်သာမန်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြံပြုချက် - အချို့သောဆေးများသည် PD လက္ခဏာများကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေသည်။
လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရမှိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အချို့သောသစ်သီးများ၊ ပဲများနှင့်အခွံမာသီးများ၌ပါ ၀ င်သောမဂ္ဂနီစီယမ်ဓာတ်များကိုပိုမိုစားသုံးခြင်းသည်အိုမင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်
၎င်းသည် ပို၍ အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ roles တစ်ခုမှာခန္ဓာကိုယ်၏အောက်ဆီဂျင်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ခံနိုင်ရည်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အောက်ပါတို့နှင့်လည်းကူညီပါသည်။
သုတေသနပြုချက်အရမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသည် serotonin အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့သောလူနာများတွင် serotonin အဆင့်နိမ့်ခြင်းကိုတွေ့ရှိရသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်အတူ serotonin မြှင့်ဆွေးနွေးခြင်းလေ့လာမှုကအောင်မြင်မှုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ကြွက်သားနှင့်အာရုံကြောလုပ်ငန်းနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတို့ကိုထောက်ပံ့သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်နိမ့်ခြင်းသည်ရေတိုတွင်လက္ခဏာမပြပါ။ သို့သော်နာတာရှည်အဆင့်များသည်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်၊ နှလုံးရောဂါ၊ အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါနှင့်အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
Natural Vitality အေးဆေးတည်ငြိမ်သော Gummies ။
NOW သည်အစားအစာမဂ္ဂနီစီယမ်စီထရိတ် Veg Capsules ။
Vitafusion မဂ္ဂနီစီယမ် Gummy ဗီတာမင်။
ဘဝသက်တမ်း Neuro-Mag မဂ္ဂနီဆီယမ် L-Threonate ။
မဂ္ဂနီစီယမ်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ။
BioSchwartz မဂ္ဂနီစီယမ် Bisglycinate ။
ဆရာဝန်၏အကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးစုပ်ယူမှု 100% Chelated Magnesium တက်ဘလက်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ဂလိတ်စတင်းသည်အောက်ပါတို့အပါအ ၀ င်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ ဂလိုင်ကိန်းတည်ရှိမှုကြောင့်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စေသည်။ ၎င်းသည်စိုးရိမ်စိတ်ကိုသက်သာစေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာသောအရိုးသိပ်သည်းဆကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်အရိုးများကိုသန်မာစေပါသည်။
ရရှိနိုင်သည့်မဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မဂ္ဂနီစီယမ် citrate နှင့် / သို့မဟုတ် magnesium glycinate ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းစသည့်အခြေအနေများအတွက်မဂ္ဂနီစီယမ်ဂလိတ်စင်းပုံစံသည်ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။
ဤဆေးသည်သွေးထဲတွင်မဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏအနည်းငယ်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အသုံးပြုသောဓာတ်သတ္တုဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သည်။ အချို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကအစာအိမ်စိတ်ပျက်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်းနှင့်အက်ဆစ်အစာမကြေခြင်းစသည့်အစာအိမ်အက်ဆစ်များစွာ၏လက္ခဏာများကိုကုသရန်လည်းအသုံးပြုသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံသည်ဟုယူဆကြသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကိုမသောက်မီသင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်စစ်ဆေးသင့်သည်၊ အထူးသဖြင့်သင့်တွင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိလျှင်။ နှလုံးဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ပantibိဇီဝဆေးများကိုသောက်သုံးသူများအတွက်ဓာတ်သတ္တုဖြည့်စွက်ဆေးသည်အန္တရာယ်မကင်းပါ။
မဂ္ဂနီစီယမ်မသောက်မီသင်မည်သည့်ဆေးကိုသောက်နေလျှင်သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုသူနှင့်စစ်ဆေးပါ။ အန္တရာယ်များ။ ဆီးချိုရောဂါ၊ အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူများသည်၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်စကားမပြောမီမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုမသောက်သင့်ပါ။
မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့မှု၏ပထမ ဦး ဆုံးလက္ခဏာများမှာမကြာခဏပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြွက်သားချောင်းဆိုးခြင်း၊ အားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်တောင့်တင်းခြင်းတို့ကိုလည်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ အစောပိုင်းအဆင့်များတွင်အစာစားချင်စိတ်နှင့်ပျို့ချင်ခြင်းများသည်အခြားအဖြစ်များသည့်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်သည်အစအ ဦး ၌မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာကိုမျှသတိမပြုမိပါ။
အကယ်၍ သင်သည်မဂ္ဂနီစီယမ်ဖြည့်စွက်များကိုအိပ်စက်ခြင်းအထောက်အပံ့အဖြစ်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ပါကအိပ်ရာမဝင်မီ ၁-၂ နာရီအကြာတွင်သောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ မင်းရဲ့အိပ်ချိန်ပုံမှန်မှာမဂ္ဂနီစီယမ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
ကြီးမားသောဓာတ်သတ္တုများသည်စုပ်ယူရန်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ကယ်လ်စီယမ်၊ သွပ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုမသုံးပါနှင့်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L Threonate Elevating သည်စိတ်ဓာတ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများကိုသက်သာစေသည်။ ထို့အပြင် Pain Physician ဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသောအခြားစာတမ်းတစ်ခုကမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်နာတာရှည်အာရုံကြောနာကျင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့မှုကိုကာကွယ်တားဆီးပေးသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အရည်ထဲတွင်ကောင်းစွာပျော်ဝင်နေသောမဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံသည်ပျော်ဝင်မှုနည်းသောအရာများထက်အူအတွင်းတွင် ပိုမို၍ စုပ်ယူသည်။ သေးငယ်သောလေ့လာမှုများအရ aspartate, citrate, lactate, and chloride ပုံစံများရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးမဂ္ဂနီစီယမ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်ဆာလဖိတ်ထက် ပိုမို၍ ဇီဝရရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
၃၅၀ မီလီဂရမ်ထက်နည်းသောဆေးများသည်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်။ အချို့လူများတို့၌မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အစာအိမ်ကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ အလွန်ကြီးမားသောပမာဏ (နေ့စဉ် ၃၅၀ မီလီဂရမ်ထက်ပိုသော) များကိုများသောအားဖြင့်မဂ္ဂနီစီယမ်သည်မလုံခြုံနိုင်ပါ။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးကဏ္aspectsများစွာတွင်ပါဝင်သောအရေးကြီးသောဓာတ်သတ္တုဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဆေးပညာအကယ်ဒမီသည်တစ်နေ့လျှင်ဖြည့်စွက်မဂ္ဂနီစီယမ် ၃၅၀ မီလီဂရမ်ထက်မပိုရန်အကြံပြုသည်။ သင်သည်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်တိုးတက်စေရန်သင်အသုံးပြုနေသည်ဖြစ်စေ၊
ဗီတာမင် D ကိုချို့တဲ့ကုသ။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အရေးကြီးသောဓာတ်သတ္တုဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်းကိုဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု ၃၀၀ တွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစတုတ္ထအပေါများဆုံးဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုသွေးပေါင်ချိန်ညှိခြင်း၊ ကြွက်သားကျုံ့ခြင်း၊ အာရုံကြောအချက်ပြခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အရေးပါသောဓာတ်သတ္တုသတ္တုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ချို့တဲ့မှုကြောင့်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါများအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤဓာတ်သတ္တုကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အခွံမာသီးများ၊ မျိုးစေ့များနှင့်ပဲများအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောသဘာဝအရင်းအမြစ်များမှရရှိနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏သုံးပုံနှစ်ပုံသည်၎င်း၏ချို့တဲ့မှုကိုခံစားနေရသည်။ ထို့ကြောင့်လူတို့အားမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုဖြည့်စွက်ပုံစံဖြင့်မကြာခဏစားသုံးရန်အကြံပေးသည်။ မကြာသေးမီကလူကြိုက်များခဲ့သောမဂ္ဂနီစီယမ်ဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုမှာမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌၊ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate နှင့်သင်ဘာကြောင့်ယင်းကိုအဘယ်ကြောင့်သုံးစွဲသင့်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ သိသမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။ ဒီတော့ဆက်ဖတ်ပါ
သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအရမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်တစ်နေ့လျှင် ၃၅၀ မီလီဂရမ်အောက်လျော့နည်းသောပမာဏနှင့်သောက်သုံးပါကခန္ဓာကိုယ်၏လုံခြုံစိတ်ချရမှုကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သို့သော်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate စားသုံးမှုမြင့်တက်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည့်ပျို့ချင်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဤလက္ခဏာများတွေ့ကြုံဖူးပါကဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါသို့မဟုတ်သင့်သောက်သုံးသောပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်များများစားစားရှိသောအခါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည်သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူနှေးခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သောအခြေအနေများသို့ ဦး တည်သွားသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ဖြည့်စွက်။ ဤဆေးသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသောမိန်းမများနှင့်သောက်သုံးသောပမာဏနည်းသောကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြည့်ပြီးဤမဂ္ဂနီစီယမ်အရင်းအမြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလူကြိုက်များနေသည်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားကြည့်ကြပါစို့။
① မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ထိရောက်စွာ ADHD တိုက်
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate လူကြိုက်များရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ဦး နှောက်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်များကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းဆားသည်ခန္ဓာကိုယ်မှအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မဂ္ဂနီစီယမ်ကို ဦး နှောက်ဆဲလ်များသို့ရောက်ရှိစေရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းမှာ ဦး နှောက်အိုခြင်းလက္ခဏာများဖြစ်သည့် ADHD (သို့) အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သောရောဂါများကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးနိုင်သည်။ ADHD သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အချိန်ယူရသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လူများသည်၎င်းသည်ကိုင်တွယ်ရခက်သည့်နေရာမှရောက်ရှိသည့်အထိသူတို့တွင် ADHD ရှိကြောင်းသတိမထားမိကြပါ။ ထို့ကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ADHD ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရာ၌အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ (၁) ။ Sun က, ဆိုးကျိုး, Weinger, JG, မော်စီတုန်း, အက်ဖ်, & လျူ, G. အ (1) ။
②၎င်းသည်အံ့ Mem ဖွယ်ကောင်းသည့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမြင်မှုတိုးပွားစေသောဖြည့်စွက်မှုဖြစ်သည်
လူတွေအသက်ကြီးလာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာအရွယ်အစားလည်းကျုံ့လာတယ်။ ယင်းသည် synapses ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သောသိမြင်မှုကျဆင်းခြင်း၏ရလဒ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်သုတေသနပြုလေ့လာချက်များအရ Magnesium L-threonate သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ synapses များ၏သိပ်သည်းဆကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမှတ်ဥာဏ်နှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate မှရရှိသောမဂ္ဂနီစီယမ်သည် ဦး နှောက်အိုမင်းခြင်းကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေပြီးအထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်ဘုံပြproblemsနာများဖြစ်လာသည်။ လက်ရှိ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမရေရာမှုအခြေအနေများသည်ဤပြissuesနာများကိုယခင်ကထက်ပိုမိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ လေ့လာမှုများကမဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်စိတ်တို့အကြားဆက်နွယ်မှုအချို့ရှိသည်ကိုပြသခဲ့သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည် ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်၎င်းသည်လူတစ် ဦး ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်စိတ်နှစ်ခုလုံးကိုလျော့ချရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းသည်အရိုးများနှင့်ကြွက်သားများသာမကကြွက်တက်ခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်သည်။ ထို့ကြောင့်အရိုးပွရောဂါခံစားနေရသူများကိုမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုမဂ္ဂနီစီယမ်ဖြည့်စွက်အဖြစ်ယူရန်မကြာခဏအကြံပေးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းဆားကိုနာကျင်မှုသက်သာစေသည့်ခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းမကြာခဏအကြံပြုလေ့ရှိသည်။
⑤မဂ္ဂနီစီယမ် L-Thronate သည်လူတို့အားပိုမိုကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်ရန်ကူညီသည်
လေ့လာမှုတစ်ခုအရလူတစ် ဦး သည်ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌မဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏမျှသာရှိရမည်ဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည် parasympathetic အာရုံကြောစနစ်ကိုသက်ဝင်စေသည်၊ ၎င်းသည်တစ်ကိုယ်လုံးကိုဖြေလျှော့ပေးသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာမဂ္ဂနီစီယမ်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ GABA receptors များနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးလူတစ် ဦး ၏အာရုံကြောစနစ်ကိုငြိမ်သက်စေသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌မဂ္ဂနီဆီယမ်များစွာလုံလုံလောက်လောက်ရရှိစေပြီးညအိပ်စက်ခြင်းကိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအကျိုးကျေးဇူးများအပြင်အခြားသောမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုအခြားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်။ ဤဆားကိုခန်ဓာကိုယ်ကြောခွဲစိတ်ပွီးနောက်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ပိတ်ဆို့နေသောသွေးကြောများကြောင့်ရင်ဘတ်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်လည်းအသုံးပြုသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤဆားသည်အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊ fibromyalgia နှင့်ဆီးချိုရောဂါတို့ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အချို့လူများကမူကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချရန်ပင်ပြုလုပ်ကြသည်။
အကယ်၍ သင်သည်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားနေပါကယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူကိုသင်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အမှုန့်အမြောက်အများကို ၀ ယ်ရန်နေရာရှာနေလျှင် Cofttek ရှိစျေးဝယ်ပါ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စံပြခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးသုတေသနစွမ်းရည်များအတွက်ဇီဝဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းလူသိများသည်။ Cofttek တွင်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူပထမတန်းစား R&D အဖွဲ့ရှိသည်။
Cofttek ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဒြပ်နည်းပညာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု၊ ဇီဝအင်ဂျင်နီယာ၊ ဆေးဝါးဆိုင်ရာဓာတုဗေဒစသည့်နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင်နာမည်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ တရုတ်၊ ဥရောပနှင့်ယင်း၏ 'အရည်အသွေးအခြေခံ၊ ဖောက်သည်ပထမ၊ ရိုးသားသော ၀ န်ဆောင်မှု၊ အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်' ၏မူဝါဒသည်၎င်းကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖောက်သည်များဖန်တီးရန်ကူညီသည်။ ကုမ္ပဏီမှရရှိသောမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်ဗုံ ၂၅ ကီလိုဂရမ်ပါဝင်ပြီးထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏အရည်အသွေးကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အမှုန့်အမြောက်အများကိုလိုအပ်လျှင်၊ cofttek.com မှာစျေးဝယ်.
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ကယ်လစီယမ်နှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုထိရောက်စေရန်သတ္တုနှစ်ခုလုံးနှင့်သင့်လျော်သောအချိုးအစားရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ကောင်းမွန်သောစည်းကမ်းချက်မှာ ၂: ၁ ကယ်လစီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်အချိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် 2mg calcium ကိုသောက်ပါကမဂ္ဂနီဆီယမ် 1mg ကိုလည်းသောက်သင့်သည်။
(1) ။ Sun က, ဆိုးကျိုး, Weinger, JG, မော်စီတုန်း, အက်ဖ်, & လျူ, G. အ (2016) ။ intraneuronal မဂ္ဂနီစီယမ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏မော်ဂျူမှတဆင့် L-threonate အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ synapse သိပ်သည်းဆ၏စည်းမျဉ်း။ Neuropharmacology, 108, 426-439 ။
(2) ။ Mazreku, IN, Ahmetaj, အိပ်ချ်, Aliko, V. , Bislimi, K. , Halili, အက်ဖ်, & Halili, ဂျေ (2017) ။ Lead Acetate၊ Vitamin C နှင့် Magnesium-L-Threonate တို့ဖြင့်ကုသသောဆွစ်ဇာလန် Albino ကြွက်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအော်ဂဲနစ်များတွင် Catalase (CAT), ALT နှင့် AST ၏လုပ်ဆောင်မှု။ လက်တွေ့ & Diagnostic သုတေသနဂျာနယ်, 11 (11) ။
(3) ။ Mickley, GA, Hoxha, N. , Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013) ။ နာတာရှည်အစာအာဟာရမဂ္ဂနီစီယမ် - L - ထရွန်နိတ်သည်မျိုးသုဉ်းခြင်းကိုမြန်စေပြီးအရသာခံခြင်းကိုမနှစ်သက်သည့်အလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 106, 16-26 ။
(4) ။မဂ္ဂနီစီယမ် l-threonate (778571-57-6) ။
ကျွန်ုပ်တိုတိုနှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးနည်းလမ်းများစွာတွင်ပိုမိုမျှတမှုရှိလာသည်။ ငါသည်လည်းသေးငယ်သော dopamine တိုးမြှင့်မှုနှင့် testosterone ဟော်မုန်းတိုးမြှင့်မှုအနည်းငယ်ရရှိပြီး၎င်းသည်အတော်အတန်တသမတ်တည်းရှိပြီးအနည်းဆုံးသာလျော့နည်းစေသည်။ (၇) နာရီလောက်အိပ်စက်ခြင်းဟာအိပ်စက်အနားယူခြင်းကို ၉ နာရီလို့ခံစားရစေပေမယ့် mag glycinate ကဒီအချက်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အိပ်နေတုန်းပဲ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate (MgT) သည်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဖြစ်စဉ်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုလျှော့ချရန်အတွက်ထိရောက်သောအာဟာရဓာတ်ဖြစ်သည်။
အချို့ဆရာဝန်များသည်စိတ်ကျရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရန်မဂ္ဂနီဆီယမ် ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်ကိုဖြည့်စွက်ရန်အကြံပြုသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည် BBB (Blood, Brain, Barrier) ကိုထိုးဖောက်ရာတွင်ပိုမိုထိရောက်ကြောင်းကျွန်ုပ်သဘောပေါက်သည်အထိအလွန်ကောင်းပါသည်။ ၎င်းကို ဦး နှောက်ကျောရိုးအရည်တွင်မဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်များမှတိုင်းတာသည်။ ငါမှတ်ဉာဏ်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျဘို့ယူပါ။
ကောင်းလိုက်တာ! ဤဆောင်းပါးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာရေးသား။ မရပါ။ ဒီ post ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်မရဲ့အရင်အခန်းဖော်ကိုသတိရစေတယ်။ သူကဒီအကြောင်းကိုဆက်ဟောခဲ့တယ်။ ငါသူ့ကိုဒီ post ကိုပို့မယ် သူကောင်းကောင်းဖတ်ပါလိမ့်မယ်တော်တော်လေးသေချာ။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ငါအိပ်ချိန်နောက်ကျနေတဲ့ Alpha GPC, Uridine 600mg နဲ့ Mag L-Threonate ၏ 300mg ကို 2,000% mg သောက်ပြီးတကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေပြီ။ ငါ့ကို 10-25% ပိုငိုက်ခံစားရစေသည်။ ငါလည်းညအချိန်မှာနိုးလာရင်မြန်မြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်။
အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်။ ကံကောင်းတာကမင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမရည်ရွယ်ဘဲတွေ့ရှိခဲ့တာ၊ ဒီမတော်တဆမှုဟာဘာကြောင့်အစောပိုင်းကဖြစ်ပျက်တာမဟုတ်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်အရမ်းအံ့သြမိတယ်။ ငါအဲဒါကို bookmarked
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ နံနက် ၂၂% နှင့်ည ၁၁ နာရီတွင်ညအချိန်တွင် ၁၁% ရှိသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်အကျွံသောက်ပါက၎င်းသည်သိမြင်မှုအားဆန့်ကျင်စေနိုင်သည်ဆိုပါကအကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် ၂ ပတ်အကြာတွင်ဖြစ်ပြီး၊ သာမန်အားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုအတွက်၎င်းကိုမသုံးနိုင်ပါ။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စွမ်းအင်နိမ့်ခြင်းစသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသတင်းပို့သူများစွာကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်သည်။
Thiamine သည်မဂ္ဂနီစီယမ်၏ cofactor တစ်ခုဖြစ်ပြီးမဂ္ဂနီစီယမ်၏မြင့်မားသောပမာဏသည် thiamine နှင့် vica-versa ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Thiamine (B-1) ကိုသင်၏မဂ္ဂနီစီယမ်ဖြည့်စွက်မှုဖြင့်သို့မဟုတ်ပြီးနောက်ပြီးနောက်သောက်သုံးပါကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဆက်လက်ရှိနေသေးမလားစမ်းကြည့်ပါ။
ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့လိုက်သွားရင်သေးငယ်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်စားစရာသောက်ခြင်းနှင့်ပြhavingနာများရှိပါက mag threonate သည်အစတွင်၎င်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်အဘို့အအိပ်ရာမတိုင်မီ 1000 မီလီဂရမ်ဖြစ်သည့်ပုလင်းပေါ်အစအကြံပြုခဲ့သည်ဆေးထိုးနှင့်အတူစတင်ရန်အလိုမရှိ။ ဒီဖြစ်ကောင်းနေတုန်းပဲခဏ၌သင်တို့ကိုမြူ၌စောင့်ရှောက်မည်အဖြစ်။
ငါအိပ်ရာမဝင်မီ 1-2gs ယူပြီး crappy ဟုခံစားရပါကနံနက်ယံ၌ 500mg cap တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို extracellular space မှအာရုံခံဆဲလ်များ၏ intracellular အာကာသသို့ရောက်ရှိစေသည်။ ၎င်းသည်အခြားမဂ္ဂနီစီယမ်ဆားများနှင့်မတူပါ။
၎င်းသည်အိပ်ပျော်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်သောကြောင့်အိပ်ရာမဝင်ခင် ၁ နာရီ ကြိုတင်၍ ။ သင်၏ဖြည့်စွက်ပုလင်းသည်တစ်နေ့လျှင်ဆေးပြား ၃ မှ ၄ ပေါင်လောက်လိုအပ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဂ္ဂနီစီယမ်ထရွန်နိတ်သည်အလွန်ကြီးမားပြီးမော်လီကျူး၏ထရွန်နိတ်အစိတ်အပိုင်းသည်ကြီးမားသည်။ စုပ်ယူမှုကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်တစ်နေ့တာလုံးကိုခွဲထုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်၏နောက်ဆုံးအစာစားပြီးလျှင်အစာပိုကြီးရန်။
L-Threonate သည်အခြားမဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံများနှင့်မတူဘဲ ဦး နှောက်ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်သည်။
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အရာ၊ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများသည်လူတို့၏အသိပညာအတွက်တကယ်ထူးခြားသည်။
သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်လက်ရှိအိပ်မပျော်မှုအပေါ်တွင်အိပ်မောကျခြင်း၊ နှိုးဆွခြင်း။ ယခုမှ စ၍ နံနက်ယံနှင့်အနိမ့်အမြင့်ထိုးဆေးဖြင့်သာသောက်ပါ။
Mag-L-Threonate သည်သွားလေရာ L-threonate သည်သာလွန်သောသယ်ဆောင်သူဖြစ်ပြီးမဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏကို ဦး နှောက်ထဲသို့တိုက်ရိုက်အာရုံခံနိုင်ပြီး ဦး နှောက်ထဲသို့လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ပါမယ်လေ့လာမှုများဒီစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ ဒါကပဲဖောင်းပွသို့မဟုတ်မဖွင့်လျှင်ငါမသိ။ ငါအမြောက်အများရနိုင်လျှင် L-threonate ယူချင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ရင်ငါ chelate နှင့်ကပ်နေသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေ2ဂရမ်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate, ဒြပ်စင်မဂ္ဂနီဆီယမ်၏ 144mg ထုတ်လုပ်မှု။
Thronate ပုံစံသည်အလွန် ဦး နှောက်ကိုအထူးသက်ရောက်ပြီး၎င်းတွင်မဂ္ဂနီစီယမ်ပါဝင်မှုနည်းသော်လည်း ဦး နှောက်မဂ္ဂနီစီယမ်ပါဝင်မှုကိုမြှင့်တင်ရာတွင် ပို၍ ထိရောက်နိုင်သည်။
ငါအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်ညမှာမဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ထုတ်ကုန်ကိုစတင်ခဲ့တယ်။ လေးရက်လောက်ငါးရက်အကြာမှာပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုမှာတိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာ၊ အလုပ်မှာအချက်အလက်အမျိုးမျိုးသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရက်သတ္တပတ်များစွာအကြာတွင်အမည်များနှင့်အချက်အလက်များကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့ပိုမိုကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုများကိုကျွန်တော်စတင်သတိပြုမိလာတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းကက။ ဤအရာကိုမပြုလုပ်မီကျွန်ုပ်သည်သေးငယ်ပြီးကြီးမားသောအရာများကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြန်ပြောပြရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် PCP နှင့်စကားပြောရန်နှင့်ငါ့ကို“ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော” သိမြင်မှုအားနည်းချက်နှင့်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်ကိုများစွာပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အာရုံကြောအထူးကုဆရာကိုပင်တွေ့မြင်ရန်လုံလောက်သည် အယ်လ်ဇိုင်းမားမှထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့စမ်းသပ်မှု၏။
ငါအကြံပြုထားသည့်ဆေးတောင့်သုံးခုကိုသောက်သုံးပြီး ၁၄၄ မီလီဂရမ်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကိုညစဉ်ညတိုင်းပေးပါသည်။ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝပြောင်းလဲသွားပြီ။
ကျွန်ုပ်သည်မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အမှုန့်ကို ၁၀ လခန့်သောက်ပြီး ၁.၀ မှ ၁.၂ ဂရမ်နေ့စဉ်ဖြစ်သည်။ ငါကအိပ်ရေးအထောက်အကူအနေနဲ့သုံးတယ်။ ငါအပြင်ဘက်ရှိမည်သည့်သက်ရောက်မှုကိုငါသတိထားမိသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ သင်က၎င်း၏တံဆိပ်အမည် Magtein google လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်မြူများကိုရှင်းလင်းစေပြီးစိုးရိမ်မှုကိုသက်သာစေသည်၊ အိပ်စက်ခြင်းကိုကူညီသည်၊ ကျွန်တော့်မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည်မဂ္ဂီကိုကူးပြောင်းခြင်းဖြင့်စိတ်ကျရောဂါကုသမှုကိုခံယူနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ငါနေ့စဉ်သုံးသည်နှင့်မပါဘဲဖြစ်လိမ့်မည်။
1g-2g အိပ်ချိန်မဝင်မီတစ်နာရီ။ စိုးရိမ်စိတ်အတွက်လိုအပ်ပါကတစ်နေ့တာအသုံးပြုရန် 500mg ။ ၎င်းသည်၎င်းကို ၀ တ်ပစ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ကိုအမှန်တကယ်ထိမိစေသည့်အရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်၎င်းတွင်ရှိစဉ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်မသင့်တော်ပါ။ သို့သော်သူသည်သင်၏စိတ်ကိုငြိမ်သက်စေပြီး Mg သည်၎င်းအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးသည့်အခါပိတ်ဆို့ထားသော receptors များအားအကျိုးသက်ရောက်စေသောဆေးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်စေသည်။ အဲဒါသဘာဝကျပါတယ်လား ဒါကြောင့်အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်မှာစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုမှခဏအနားယူပြီးနိုးထစေပါ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပေမယ့်သူကပြောတယ်, ငါအမှန်တကယ်အမှန်တကယ်ကယူပြီးနောက်ထိုနံနက်အမှန်တကယ်ခြားနားချက်ခံစားရခဲ့တယျ။
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွန်အကျွံသည်ထိုင်ခုံများချို့တဲ့စေသည်။ ကျွန်တော်တို့အများစုအတွက်တစ်နေ့လျှင် 200 mg ကျော်သည်။ လူအချို့သည်ပြproblemsနာမရှိသောဖြည့်စွက်မဂ္ဂနီစီယမ် ၅၀၀ မီလီဂရမ်ကျော်ကိုသည်းခံနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်ကိုအကြံပြုထားတဲ့ဆေးဟာတစ်နေ့ကို ၁၄၄ မီလီဂရမ် elemental (pure) မဂ္ဂနီစီယမ်ဖြစ်သည်။ အချို့လူများသည်အစတွင်အနည်းငယ်ငိုက်မိကြသည်။ အချို့ကမူ ဦး ခေါင်းအတွင်းသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးလာသည်ကိုသတိပြုမိပြီးအချို့ကမူခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ T အကယ်၍ သင်သည်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုချုပ်နှောင်ထားရန်သောက်လျှင် Mg Threonate ထည့်နေစဉ်သင်၏လက်ရှိဆေးကိုဆက်လက်သောက်ရန်ကြိုးစားကောင်းလိုပေမည်။
အကယ်၍ သင်သည်ထိုင်ခုံများချောင်နေလျှင်သင်ယခင် Mg ပုံစံကိုဖြတ်တောက်ပါ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate - ခင်ဗျားရဲ့အတွေ့အကြုံကဘာလဲ။
ဤနေရာတွင်မည်သူမဆိုမဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကိုဖြည့်စွက်အနေဖြင့်ယူနေပါသလား။ မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကဘာလဲ
သငျသညျကိုယူမစတင်ခင်, သင်ကပေါ်မှာရှိနေစဉ်, သင်ပြုလျှင်သင်ကယူပြီးရပ်တန့်ပြီးနောက်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲ
ဒီ site ရဲ့ admin ကသူ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုတကယ်အားစိုက်ထုတ်နေတယ်လို့ထင်တယ်၊ အကြောင်းကတော့ပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာအရည်အသွေးအခြေပြုဒေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်အေးစိမ့်သောစိတ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးဂလိုင်ကိတ်သည်ခန္ဓာကိုယ်အပန်းဖြေမှုပိုဖြစ်သည်။
ငါ့အမြင်အတွက်နှစ် ဦး စလုံးကြိုးစားနေရကျိုးနပ်။
Thronate သည်အမိုင်နို - အက်ဆစ်ပုံစံဖြင့် Acetylcholinesterase inhibitor အဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာအူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (သို့) Huperzine A, Alpha GPC, ငါးဆီအကြီးစားဆေးတွေရဲ့ဖြည့်စွက်မှုတွေကြောင့်မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသတိထားမိရင် Mag Glycinate ကိုငါရှက်မိလိမ့်မယ်။
ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ငါမဂ္ဂနီစီယမ် l-threonate ကြိုးစားနေနှစ်ပေါင်းများစွာ။
ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်၊ ဒါကငါ့ရဲ့အိပ်ရေးကိုပိုကောင်းစေတယ်။ အဓိကကတော့အဲဒါကိုယူပြီးနောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်ရနိုင်တဲ့တည်ငြိမ်မှုအဆင့်ဟာမတူညီပါဘူး။
ဂလိုင်ကိတ်စ်ကဲ့သို့သောအခြားမဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံများမှမည်သည့်စိတ်ခံစားချက် / စိုးရိမ်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကို l-threonate မှရရှိပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေပါကမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောမဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံဖြစ်နိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ဦး နှောက်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်သည်။
ငါအခြား Mg ပုံစံများကိုကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီသူတို့ကငါ့ကိုပြေးသာပေး။
Melatonin, ZMA, Skullcap, 5-HTP, GABA, Gingko, Valerian, PhosphatidylSerine တို့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ L-Threonate သည် Mg ၏ပုံစံကဲ့သို့တသမတ်တည်းနှင့်ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Thronate အတွေ့အကြုံများ?
ငါမကြာသေးမီကအချို့သောမဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ကို ၀ ယ်ပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများ မှလွဲ၍ အခြားတစ်ခုမျှမရှိခဲ့ပါ။ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းခြင်း၊ ဦး နှောက်မြူမှုန်ဝါးခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် 'ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်' နှင့် ပို၍ တူသည်။ စသည်ဖြင့်တစ်နေ့လျှင် ၁-၁.၅ ဂဂရမ်ခန့်သောက်သည်။
ဒီမဂ္ဂနီစီယမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတူညီတဲ့ (သို့) ကွဲပြားခြားနားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ဖူးလား။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate သည်ကျွန်ုပ်ကိုအနားယူပြီးအိပ်စက်ခြင်းကိုကူညီသည်။
Dementia နှင့်အတူလူနာများမှမဂ္ဂနီစီယမ် L-Thrononate ၏တံဆိပ်ကပ်နှိပ်စစ်ဆေးမှု
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (အေဒီ) သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅.၂ သန်းမျှရှိသည်။ အေဒီနှင့်အခြားစိတ်ဖောက်ပြန်မှုများသည်သက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီး ၃ ဦး တွင် ၁ ဦး နီးပါးထိခိုက်သည်။ လူနာစောင့်ရှောက်မှု၏ဘဏ္financialာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှင့်အတူလုံခြုံပြီးထိရောက်သောကုသမှုကိုရှာဖွေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate (MGT) ၏သိမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ်သုတေသနပြုချက်အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်အေဒီနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းအတွက်အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ MGT ဖြည့်စွက်အပြီးတွင်အာရုံကြောနှင့်သိမြင်မှုရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်၍ တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း NMDAR အချက်ပြလမ်းကြောင်းများအားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအပါအ ၀ င် MGT ၏သက်ရောက်မှုများကိုစက်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်ပေါ်ထွက်လာသည်။ လက်ရှိဖွင့်လှစ်သောတံဆိပ်ကပ်စမ်းသပ်မှုသည် MGT အသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနူးညံ့ပြီးအလယ်အလတ်ရှိသောစိတ်ဖောက်ပြန်မှုရှိသူများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ လူနာ ၁၅ ဦး သည် 5.2F-FDG-PET ပုံရိပ်၊ သိမြင်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုနှင့်သွေးကိုခံယူသည်။ ကုသမှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲမြန်မှုအပါအ ၀ င် MGT ဖြည့်စွက်ခြင်း၏ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လူနာ ၁၅ ဦး ကိုအခြေခံနှင့် ၁၂ ပတ်ကြာကုသမှုခံယူသည်။ , နှုတ်ကျွမ်းကျင်စွာနှင့်မှတ်ဉာဏ်။ သိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သွေးဆွဲခြင်းတို့ကို ၈ ပတ်ကြာ MGT ကိုရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များသည်ဒေသတွင်း ဦး နှောက်ဆိုင်ရာဇီဝြဖစ်ပျက်မှုသိသိသာသာတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ၁၂ ပတ်ကြာ MGT ကုသမှုပြီးနောက်စုစုပေါင်းနမူနာတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသိမြင်မှုလည်ပတ်မှုအညွှန်းကိန်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူပြသခဲ့သည်။ မြင့်မားသောသွေးနီဥမဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်များသည်လူနာအားလုံး၏အလုံးစုံသိကျွမ်းမှုနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ MGT ကိုအေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါရှိသူများအတွက်ထိရောက်သော၊ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်၊ တတ်နိုင်သောဆေးကုသမှုဆိုင်ရာဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အကဲဖြတ်ရန်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်ထားသောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။
MMFS-01 ၏သိပ္ပံနည်းကျချို့ယွင်းမှုကိုကုသသော Synaps Density Enhancer ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု။ ကျပန်း၊ မျက်မမြင်၊ ရလဒ်များအရကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည့် ial စမ်းသပ်မှု。
Awesome! ၎င်း၏အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်ဆောင်းပါး, ငါဒီဆောင်းပါးကနေနှင့်ပတ်သက်။ အများကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ကူးတယ်ပါပြီ။
မကွေး (L-threonate) သောက်သုံးသောမေးခွန်း？
မင်္ဂလာပါ။ အတိတ်ကာလက Magtein (သို့) L-threonate ကိုသုံးခဲ့တဲ့လူတွေ၊ တစ်နေ့တစ်နေ့သူတို့ရဲ့သောက်ဆေးတွေကဘာလဲ၊ အထူးသဖြင့်သူတို့ကအခြားမဂ္ဂနီစီယမ်ပုံစံများအကြားလှည့်လျှင်
အခုအချိန်မှာငါတစ်နေ့လျှင် ၃၆၀၀ mg glycinate (နံနက် ၁၈၀၀ mg၊ ညမှာ ၁၈၀၀ mg) သောက်နေပါတယ်။ တံဆိပ်၏အဆိုအရ၎င်းသည်မဂ္ဂနီစီယမ်၏နေ့စဉ် ၁၀၀% တန်ဖိုးထက်ပိုသော်လည်း၎င်းသည်ကြွက်တက်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားများပိတ်ဆို့ခြင်းအများစုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
မဂ္ဂနီဆီယမ် ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်သည်နေ့စဉ်မဂ္ဂနီစီယမ်တန်ဖိုး၏ ၃၆% သာဖြစ်ပြီးတစ်နေ့လျှင်မက်ဂျင်ဓာတ် ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်သည် L-threonate မှလုံလောက်သောမဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်အခြားမဂ္ဂနီစီယမ်အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုပါကအဘယ်ကြောင့်နည်း။ L-threonate ကိုသောက်စဉ် L-threonate အပြင်
အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့အဘို့ L-threonate ကြိုးစားနေပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်။
ငါ ND ရဲ့မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate အမှုန့်ကိုအကြမ်းအားဖြင့် ၁၀ လကြာသောက်နေပြီး ၁.၀ - ၁.၂ ဂရမ်နေ့စဉ်။ ငါကအိပ်ရေးအထောက်အကူအနေနဲ့သုံးတယ်၊ ဒါကအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ငါအပြင်ဘက်ရှိမည်သည့်သက်ရောက်မှုကိုငါသတိထားမိသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။
သဘာဝရင်းမြစ်မဂ္ဂနီစီယမ် L Thronate? မဂ္ဂနီစီယမ် L Theronate ကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုထားသည်။ ၎င်းသည်ရောင်းသည့်တံဆိပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲတူညီသောပုံသေနည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါသိသည်အတိုင်း, l-threonate သည်ရှင်းလင်းမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် neurotransmission ကိုအားပေးသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ ကြွက်သားတင်းမာမှု / ကြွက်တက်ခြင်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်ညှိခြင်းအတွက်ဂလိုင်စတင်း။ အေးဆေးတည်ငြိမ်များအတွက် citrate နှင့်ပုံမှန်နှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။
သငျသညျဖျောပွထားပါရောဂါလက္ခဏာတွေများအတွက် citrate ရလိမ့်မယ်။